Ny vilany mitongila, adidy ny toko… | NewsMada
Ny vilany mitongila, adidy ny toko…
« Miala bala », hoy ny fitenenana. « Miala ilany », hoy ny tanora… Zary fomba fanaon’ity fitondrana ity io. Fanilihana andraikitra koa no azo ilazana azy. Ailiny amin’ny mpitondra nifandimby teo aloha avokoa ny tsy fetezan-javatra rehetra mitranga eto amin’ny firenena. Anisan’izany, ohatra, ity olana goavan’ny Jirama ity. “Efa antitra avokoa ny fitaovana, tsy mba nikarakara na nijery izany ny fitondrana teo aloha…”. Ny fahantrana sy ny fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka amin’ny lafiny maro (sosialy, kolontsaina, fiarahamonina…). Eny fa na ny lafiny politika sy toekarena koa aza. Mailaka ery miteny fa takaitra navelan’ny mpitondra teo aloha avokoa izany olana rehetra izany.
Izany, rey olona, no tena hoe “miala bala”. Fanaon’ny kanosa anefa izay miala andraikitra izay. Manilika ny rihitra hatrany amin’ny hafa, rehefa tapi-dalan-kaleha tsy mahita vahaolana hiatrehana ny zava-misy. Endrika sy taratry ny fahalemena koa izany. Efa hiarahan’ny rehetra mahita sy mahatsapa izany. Tsy takona afenina, toy ny masoandro be lohataona. Kabary ambony vavahady, fampandriana adrisa, ronono an-tavy no betsaka.
Vao niditra sy naka fahefana teo anefa dia efa nahita ny zava-misy. Matahotra ny masony, kanefa nifidy ny lohany. Izy na izy ireo anefa no eo amin’ny fitondrana, tompon’ny fahefana izao. Ny fahavitana tsaratsara kokoa noho ny vitan’ny teo aloha no tokony himasoana, hanaovana fanamby.
Hoy ny fitenenana hoe : “ny vilany mitongila, adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko…”. Azo ovana ireo hifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny izany. Ny firenena no mitontogana, ny fahantrana no lalimpaka, ny olana ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-piarahamonina no mampiteny ny moana… adidin’iza ? Adidin’iza indray e ? Adidin’ny mpitondra.